Edito Taratra Archive | NewsMada
Par Taratra sur 01/12/2021 Edito Taratra, NS Malagasy
Tao anatin’ny andro vitsivitsy izay, trangana herisetra telo no nisongadina sy nahatonga resabe. Tany Ihosy, asa na nentin’ny inona ilay “assistant parmementaire”, tsy solombavambahoaka akory, fa mpanampy, irakiraka no asany, kanefa dia nanampatra fahefana. Nahavita nikasi-tanana, namelaka tehamaina manamboninahitra ambony, kaomisera eo anivon’ny polisim-pirenena tany an-toerana. Fahasahiana tsy misy toa izany. Mbola vao “assistant” no […]
Par Taratra sur 30/11/2021 Edito Taratra, NS Malagasy
Hatramin’izao, tsy mbola vita tanteraka aloha ny ady amin’ny valanaretina Covid-19. Ahina hihamafy sy hihasarotra izany, raha tsy asiana fitandremana sy fiambenana. Fahavalo tsy hita maso tsinona, miovaova endrika, tsy mifidy olona… Amin’izany, misy ihany ny tsy mahalala na tsy miraharaha. Tsy hita be ihany, ohatra, izay fanajana sy fepetra ara-pahasalamana eny rehetra eny: fanaovana […]
Par Taratra sur 29/11/2021 Edito Taratra, NS Malagasy
Mbola ny amin’ny fiatrehana ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 ihany ny resaka. Tsy mankaleo ny resaka momba izany, tsy mandreraka, tsy mahakivy. Eny, na inona na inona no efa voalaza na ny tsy voalaza. Tsy azo lavina sy tsy takona afenina, mirongatra ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 any Morondava amin’izao fotoana izao. […]
Par Taratra sur 27/11/2021 Edito Taratra, NS Malagasy
Mampiavaka ny Malagasy maneran-tany ny fihava­nana? Ny Conseil du fampihavanana malagasy (CFM) aza, miady ny hanaovana izany ho vakoka iraisam-pirenena. Hanao ahoana? Mandra-pitrangan’izay hitranga, mila mandini-tena ihany isika Malagasy: hatraiza marina, ohatra, no tena iainana ny hoe fihavanana amin’izao vanim-potoana izao? Na amin’izay tena maha izy azy izay fihavanana izay… Misimisy ihany, ohatra, ny fomba […]
Par Taratra sur 26/11/2021 Edito Taratra, NS Malagasy
Efa manomboka miantraika mafy ary maharary amin’ny vahoaka eny ifotony amin’izao ny voka-dratsin’ny fidangan’ny vidim-piainana… tsy voafehy? Mila ho tsy voafehy koa mbamin’izay misy sy iainana andavanandro eny anivon’ny fiarahamonina amin’izany. Tsy inona fa ny tsy fandriampahalemana sy tsy filaminana, saika miseho amin’ny endriny samihafa: tsy hita hovisavisaina sy hotanisaina. Manomboka amin’ny fanararaotana afitsoky ny […]
Par Taratra sur 25/11/2021 Edito Taratra, NS Malagasy
Tsy fandriampahalemana, fidangan’ny vidim-piainana, haintany. Ireo ny fahasahiranana manjo ny vahoaka amin’izao, vahaolana haingana sy maharitra. Tsy lavina, misy ny ezaka ataon’ny fitondram-panjakana, saingy mby amin’ny hoe tsy ren’izay vazan’aina, sanatria? Na fandio iray siny tsy mahaleo fandoto eran-tandroka… Isaky ny misy trangana tsy fandriampahalemana, ohatra, toy ny hoe tany tsy misy fanjakana ny fijerin’ny […]
Par Taratra sur 24/11/2021 Edito Taratra, NS Malagasy
Loza iray, loza roa… Efa tsy takona afenina intsony amin’izao ny fihanaky ny valanaretina Covid-19. Faritra maromaro no iparitahan’izany, ary misy ny tranga ao anatin’ny fahasarotana. Mbola mampanontany tena ny sasany ihany amin’izao izay mety ho antony fototra mampirongatra ny aretina. Tsy nampoizina? Nefa tsy misy trangan-javatra kisendrasendra na mandeha ho azy amin’izao, fa misy […]
Par Taratra sur 23/11/2021 Edito Taratra, NS Malagasy
Mbola mampikaikaika ny vahoaka amin’izao ny fidangan’ny vidim-piainana: mafy, sarotra… Na eo aza, ohatra, ny ezaka ataon’ny fitondram-panjakana amin’itsy sy iroa: tsy hita be ihany. Tsy mahasehaka ny maro sy ny sehatra rehetra, saika tsy mahafa-po, tsy maharitra. Na izany aza, efa zava-dehibe ny fisian’ny karazana fanampiana sy fanohanana ny lafiny sosialy, ny famerana ny […]
Par Taratra sur 22/11/2021 Edito Taratra, NS Malagasy
Maina ny tany. Mila ho maina mbamin’ny tenda, ny teny… Inona indray no holazaina na hozakaina amin’izao. Efa manomboka manahirana izao ny fahitana rano amin’ny faritra sasany; eny, na izay hosotroina sy hahandroan-kanina aza. Vao mainka izay amin’ny famokarana: fambolena, fiompiana, taozavatra… Hanao ahoana? Mampanahy be ihany izay havoakan’ny ampitso. Tsy olana amin’ny vanim-potoana hoe […]
Par Taratra sur 20/11/2021 Edito Taratra, NS Malagasy
Loza iray, loza roa… Tsy inona fa ny fihanaky ny valana­retina Covid-19 amin’ny faritra sasany indray. Miverina manao tampody fohy izany tato ho ato. Hanao ahoana? Mitady hahazo vahana ny fiparitahany, raha tsy tandremana sy sorohina malaky. Andiany fahatelo? Ilaina ny fanadiha­diana, famoahana sy filazana ny marina. Aleo ifanatrehana isan’andro ho an’ny rehetra ny raha­raha. […]
Par Taratra sur 19/11/2021 Edito Taratra, NS Malagasy
Misy ny hoe mandona tapany hahazoana erany? Hafetsifetsena, fanambakana… Eo amin’ny politika amin’izao, karazana dona kely… mandrava be? Na ahina ho izany… Nahoana? Efa fantatra fa na inona na inona mitranga sy ataon’ny mpitondra, tsy mety amin’ny mpanohitra avokoa amin’ny fitsikerana. Raha tsy manao izany izy ireo no hafahafa fa toa tsy mahay ny asany […]
Par Taratra sur 18/11/2021 Edito Taratra, NS Malagasy
Manao tampody fohy indray ny valanaretina Covid-19 amin’izao? Toy izay miseholany any amin’ny faritra Menabe, faritra Vakinankaratra. Andiany fahatelo? Na efa karazany hafa… Vokatry ny fisokafan’ny sisintanin’i Madagasikara no hoe antony? Raha tsy izany, ny tsy fitandremana na tsy fanajana loatra intsony ireo fepetra sakana tsy hiparitahan’ny valanaretina amin’izay atao sy iainan’ny ankamaroan’ny olona. Na […]